Archives: nzute ihe ịma aka nke digitization - TELES RELAY
Nke a bụ otu n'ime nchegbu ndị ọkachamara welitere maka emume International Archives Day nke emere na June 9, 2021.
Site na Latin “Archivum”, Archives na-egosipụta akwụkwọ niile, okwu, omume, nnakọta, na obere ncheta mkpokọta, metụtara akụkọ ntolite nke ndị mmadụ. Ha na-eje ozi dị ka ihe ndabere maka ụmụ ụmụ ga-eme n'ọdịnihu nyocha, mee ka ihe ọmụma baa ọgaranya ma wuo ọdịnihu. Dị ka mba ndị ọzọ n'ụwa, Cameroon na-ahụ ụbọchị metụtara ya na June 9, 2021, n'okpuru isiokwu a: "Ime ka ụlọ ebe nchekwa dị ike na ọnọdụ nsogbu maka ọchịchị ka mma". Dịka mịnịsta na-ahụ maka omenaala na omenaala, bụ Pierre Ismail Bidoung Mkpatt, bụ onye wepụtara mmemme ahụ n’ụbọchị Wenesde a n’ụlọ ebe a na-edebe ihe ngosi n’ala anyị, isiokwu a na-akpọku ndị na-eme ihe nkiri dị iche iche ka ha “nwekwuo ume ịnagide ọnọdụ tara akpụ chere ngalaba a”.
Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt, Mịnịsta na-ahụ maka omenaala na omenaala
Adaba na mgbanwe dijitalụ
Mbipụta nke atọ nke izu ụka International Archives, nke mepere ruo na June 3, na-enye ndị ọkachamara ohere ịlele nsogbu metụtara uru na ichebe ebe nchekwa ihe. A na - ahazi ụbọchị mmeghe na ụlọ redio CRTV iji weghachite ihe dị mkpa nke akwụkwọ, teepu, okwu na isi ihe ndị ọzọ mere na Cameroon. Dịka ọmụmaatụ, arụkwaghịm nke onye isi ala mbụ Ahmadou Ahidjo, ọdachi nke Ọdọ Mmiri Nyos ma ọ bụ nnabata nke onye isi ala Paul Biya na ụlọ ọrụ kachasị elu. Dabere na onye na-agụ akwụkwọ Éric Dikos Oumarou, ihe nketa ndị a kwesịrị ka e jiri digitization na-aga n'ihu na ebumnuche maka nrigbu ha ogologo oge.
Nye aka na ochichi
Nke a bụ ihe ndabere nke isiokwu nke ụbọchị nchekwa mba ụwa niile na Cameroon. Dị ka Director nke Archives na Documentation na Ministry of Arts and Culture si kwuo, ọ bụ ajụjụ nke "iwusi ihe onyinye ochie na ịgbasa ya na nyiwe dijitalụ maka oke mkpebi nke ndị na-eme mkpebi". Maka Dr Ngwang Michael, “Mgbasi ike a na-egosi mmegharị nke usoro iwu”. Iji mezuo nke a, otu ndị ọrụ aka na-arụ ọrụ maka nhazigharị National Archives nke Cameroon. Ihe omuma na ndozigharị ga-emelite na www.ochievesnationales.cm.
Edemede a pụtara izizi na https://www.crtv.cm/2021/06/archives-relever-le-defi-de-la-numerisation/